BGB – democracy for burma
#MYANMAR #BURMA ယခုလအတွင်း မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်တလျှောက်တွင် #RSO သောင်းကျန်းသူ
On May 30, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်သောင်းကျန်းသူများနှင့် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဖက်မှ စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်နေ
ယခုလအတွင်း မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်တလျှောက်တွင် RSO သောင်းကျန်းသူ လက်နက်ကိုင်များနှင့် နယ်စပ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအကြား မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေမှုကြောင့် ကျဆုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိရာ မေလ (၂၈) ရက်နေ့က မိုင်တိုင် (၅၂)နှင့် (၅၃)ကြား သောင်းကျန်းသူ လက်နက်ကိုင်များနှင့် မြန်မာနယ်စပ်လုံခြုံရေးတပ်များအကြား ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲကြောင့် နှစ်ဖက်နယ်စပ်အခြေအနေမှာ တင်းမာမှု ရှိနေပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဖက်မှ စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုများကို ပြုလုပ်နေကြောင်း သတင်းများအရ သိရသည်။
တဖက်နိုင်ငံခိုင်လုံသော သတင်းရပ်ကွက်များမှ လာသည့်သတင်းများအရ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့် တပ် (BGB) တပ်ရင်းသို့ တင့်ကား (၆)စီး၊ တာပေါ်လင်အမဲအလုံပိတ်ထားသော ဆယ်ဘီးကား (၃)စီး၊ တပ်အင်အား (၅၀၀)ကျော်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဖက်ကမ်း နယ်စပ်သို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စစ်တပ်မှ လည်း နယ်စပ်တစ်လျှောက် တပ်စွဲထာကြောင်း သိရသည်။
မေလ (၂၈) ရက်နေ့က မြန်မာနယ်စပ်ဖက်သို့ ၀င်ရောက်လာသည့် အ၀ါရောင် ပြောက်ကျားဝတ် သောင်းကျန်းသူ လက်နက်ကိုင် တစ်ဦးသေဆုံးခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်နိုင်ငံမှ ကန့်ကွက်စာများကို အပြန်အလှန် ပေးပို့ခဲ့ပြီး သေဆုံးခြင်းဖြစ်စဉ်နှင့်အတူ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးမှာလည်း ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း၊ သေဆုံးသူမှာ BGB တပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ အဆိုပါ BGB တပ်ဖွဲ့ဝင်ပျောက်ဆုံးနေမှုနှင့် အသက်ရှင်လျှက်ရှိပါက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဖက်သို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုထားကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် ကော့ပဇားသတင်းစာတွင် သေဆုံးသူမှာ BGB တပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားကြောင်း ဆိုသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ယခုကဲ့သို့ ပြောကြားခြင်း၊ စစ်ရေးပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနယ်စပ်လုံခြုံရေးမှ တစ်စုံတစ်ရာ ဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုးမရှိသေးကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အလားတူ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်တလျှောက်တွင်လည်း ကင်းစခန်း (၁၂)ခုကို တိုးချဲ့တည်ဆောက်နေကြောင်း သိရသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဖက်မှ တောင်းသည့် အလောင်း လွှဲပြောင်းပေးချိန် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ၀င်ရောက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် နယ်စပ်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့
မေလ (၂၈) ရက်နေ့က မြန်မာပိုင် နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရာက်လာသော RSO သောာင်းကျန်းသူ (၁)ဦးအား မြန်မာဖက်မှ ခုခံပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့မှုအပေါ် တဖက် BGB တပ်ရင်းမှ ထိုသေဆုံးသူမှာ BGB မှ ၄င်းတို့၏ တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟု ပြောဆိုကာ တောင်းဆိုမှုကြောင့် မြန်မာနယ်စပ်လုံခြုံရေးတပ်မှ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့်အညီ ယနေ့ ညနေ (၄)နာရီကျော်ခန့်တွင် ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရန် သွားရောက်စဉ် နယ်စပ်အနီး အမည်မသိ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှ ၀င်ရောက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် မြန်မာနယ်စပ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် BGB တပ်ဖွဲ့ဝင်များအကြား ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယင်းသို့ ပစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း လွှဲပြောင်ပေးမည့် အလောင်းကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့် တပ်မှ လက်ခံရရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမီဒီယာများတွင် ဖော်ပြထားချက်အရ သိရသည်။
From BDR Bangladesh Rifles to BGB
On November 6, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Border Guard Bangladesh (BGB), renamed aftera2009 bloody mutiny, hasa218 year history.
The border force, previously known as Bangladesh Rifles (BDR), had gallantly contributed to the 1971 Liberation War.
It was renamed nearly two years after the Feb 25-26, 2009 mutiny.
Over 50 army officers, including then BDR Director General Maj Gen Shakil Ahmed, were killed.
The border watchdog was known as ‘Ramgarh Local Battalion’ at its inception during the East India Company rule.
On Dec 8, 2010abill — ‘Border Guard Bangladesh Bill-2010 — was pushed through the Parliament.
Then President Md Zillur Rahman signed it intoalaw on Dec 20 the same year.
Various newspapers started calling the force BGB after the President’s approval.
The force’s new flag and monogram were unveiled on Jan 23, 2011.
နစက-BGB နယ်စပ်လုံခြုံရေး တိုးမြင့်ချထားမှု အရှိန်မြင့်မားလာ
On November 27, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
မြန်မာ-ဘင်္ဂလာ နယ်စပ်မှတ်တိုင် အမှတ် ၅၀၊ ၅၁၊ ၅၂နှင့် အနီးတ၀ိုက်ရှိ နစက-BGBတို့အကြား နိုဝင်္ဘာ ပထမအပတ်က လုံခြုံရေး တိုးမြင့် ချထားမှု အရှိန်မှာ ပိုမိုမြင့်မားလာကြောင်း နယ်စပ်မှ သတင်းပေးပို့သည်။
ဘင်္ဂလာ အခြေစိုက် အမည်မသိ နက်လက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တဖွဲ့အနေဖြင့် နိုဝင်္ဘာ ၆ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက် ရခိုင်ပြည်နယ် နယ်စပ်လမ်းများကို ပြုလုပ်နေသော GE တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား အငိုက်မိတိုက်ခိုက်ရာ တစ်ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီး ၃ ဦးမှာ ပြန်ပြေးဆွဲ ခံရမှုမှ ယခုကဲ့သို့ နယ်စပ်တင်းမာမှုမှ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ တိုးမြင့်ချထားမှု ပြန်လည်မရုပ်သိမ်းသေးဘဲ ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းအခင်းဖြစ်ပွားမှုကြောင့် မောင်တောမြို့နယ် နယ်မြေ ၇ နစက- နတ်ချောင်းဆရီမြို့နယ် အခြေစိုက် BGB အမှတ် ၁၅ တို့အနေဖြင့် အရေးပေါ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်မှာ လေးကြိမ်တိုင်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ချထားမှု နှစ်ဘက်စလုံးမှ တိုးမြင့်လျက် ရှိနေကြောင်း ယင်းဒေသခံ မျက်မြင်များက အတည်ပြုပြောဆိုသည်။
နစက-BGB တို့အနေဖြင့် ယင်းခြုံခိုပစ်သတ် ပြန်ပြေးဆွဲသွားသော အဖွဲ့မှာ RSO တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြောင်းနှင့် နစကအနေဖြင့် BGBအား ရှာဖွေအပ်နှံရန် အကြိမ်ကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကာ ပန်ကြားထားသော်လည်း ယခုအချိန်ထိ ဖေါ်ထုတ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးချေ။
နစကအနေဖြင့် ပြန်ပြေးဆွဲခံ ယင်းတို့ GE တပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးအား BGBက ရှာဖွေ၍ ပြန်လည်မအပ်နှံနိုင်င်လျှင် ဘင်္ဂလာပိုင်နက်တွင်းသို့ ယင်းတို့ကိုယ်တိုင် ၀င်ရောက်ရှာဖွေမည်ဖြစ်ကြောင်း ကမ်းလှမ်းမှုများရှိကြောင်း နယ်စပ်သတင်းများအရ သိရှိရသည်။
BGB အနေဖြင့် ယင်းတို့နတ်ချောင်းဆရီနယ်မြေရှိ ဒိုးဆိုးရီ၊ လီမော်ဆိုးရီ၊ အာဆာတိုလီနှင့် ဆာက်တာလား နယ်မြေများရှိ ဒေသခံများကို မေးမြန်းရှာဖွေခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် RSO မှ ယင်းနယ်မြေအပြင် နယ်စပ်ဒေသရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအား နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများ ရှိနေသဖြင့် ဒေသခံများမှာ စိုးရိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ဒေသခံများက ပေးပို့သော သတင်းများအရ သိရှိရသည်။
ဘင်ဒရိုဘင်ခရိုင် နတ်ချောင်းဆရီမြို့နယ် အခြေစိုက် BGB အမှတ် ၁၅ တပ်ရင်းမှူး မာဟာဘ်ဘူရ် ရော်ဟ်မာန် PSC က “ပြန်ပြေးဆွဲခံရတဲ့ မြန်မာ့စစ်တပ်ကသူတွေအတွက်ကြောင့် နှစ်ဘက်နယ်စပ်က စစ်တပ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေ ခုချိန်ထိ နေ့ညအသင့် ရှိနေတုန်းပါဘဲ၊ လုံခြုံရေးတွေ အတွက်ပါ၊ အစောပိုင်းတော့ နယ်စပ်အနီးက လူထုတွေ လုံခြုံတဲ့နေရာဘက်ကို ရွေ့ပြောင်းခဲ့ကြပါတယ်။”ဟု ဒေသခံ သတင်းထောက်တဦးအား ပြောဆိုလိုက်သည်။
ဒိုးဆိုးရီနယ်မြေမှ စေယမာန် အာဘ်ဒူ ရော်ဆိဒ်က “ပြဿနာအစတော့ စိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်၊ အိမ်မရအထိပေါ့ဗျာ၊ သို့သော်လည်း BGBက အနီးအနားမှာ ရှိနေတော့ ဖြေသာပါတယ်။”ဟု ဆိုကြောင်း ယင်းဒေသခံသတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့ထားသည်။
မြန်မာအစိုးမရ ဘင်္ဂလာပိုင်နက်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအား မောင်တောမြို့နယ်တွင် အခြေချပေးမည်ဟု တရားမ၀င် ကောလဟလ သတင်းများ ပေးဆောင်ပြီး ခေါ်ဆောင်နေမှုသတင်းများကြောင့် တချို့မှာ သွားရောက်ဆက်သွယ် နေထိုင်သူများ ရှိနေသဖြင့် BGB အနေဖြင့် ယင်းသတင်းကြောင့် မကျေနပ်မှုများ စတင်ရှိလာနေသည်ဟု နယ်စပ်သတင်း တခုက ဆိုသည်။